Casing efa voavitrana
Mampifangaro ny biraony
Fitaovana Oilwell hafa
Fanamafisana API Half andalana & Fanamafisana andalana API
Nipple & Nipple Coupling
Mpiaro amin'ny lalana
Float Collar & Float Kiraro
Ny fanamarinam-pahefana hampiasa ny lisansa API Monogram ofisialy
Ny ekipanay dia nandray anjara tamin'ny Fampirantiana Abu Dhabi faha-22
amin'ny admin amin'ny 19-12-18
Tamin'ny volana Novambra 2019, nandray anjara tamin'ny fampirantiana solika tao Abu Dhabi ny orinasanay. Nandritra ny fampirantiana, dia nihaona namana taloha maro izay efa niara-niasa nandritra ny fotoana ela, ary niarahaba ireo namana vaovao sasany izay liana amin'ny fiaraha-miasa. Amin'ity fampirantiana ity dia nahazo vola be sy be dia be ny orinasanay ...
Fampirantiana menaka OTC any Etazonia
Tamin'ny Mey 2018, nandray anjara tamin'ny fampirantiana iraisam-pirenena momba ny solika sy solika (OTC) isika, izay nosokafana tao Houston, Etazonia. Fanindroany io taorian'ny nahitantsika voalohany ny fampirantiana OTC tamin'ny taona 2017. Ity dia fampiratiana ity dia tsara lavitra noho ny taona 2017. Nandritra ny fampirantiana dia nahita namana taloha maro izahay ...
Ny ekipanay dia nandray anjara tamin'ny fampiratiana OTC tany Houston
Tamin'ny taona 2018, mpanjifa maro Atsinanana maro no tonga nitsidika ilay orinasa mba hanandrana fiaraha-miasa. Nanomboka ny 1 May ka hatramin'ny 4 May 2017, nandray anjara tamin'ny fampirantiana OTC an'ny American Petroleum ny orinasa teto, ary nitsidika ny mpanjifa efa ela niarahanay taloha teto Etazonia, nitady vola ...
Manatrika ny fampirantiana OTC amin'ny taona 2017 izahay
by admin on 17-09-01
1 Mey 2017 - faha-4 May, valo-polo ambaratonga iraisam-pirenena momba ny solika sy famoahana entona (OTC) ao an-drenivohitry ny United States of Houston NRG PARK nanao ny fampirantiana OTC isan-taona ka lasa fampisehoana be indrindra sy fampirantiana iraisam-pirenena momba ny menaka sy entona manerantany. Sehatra iray manan-danja ho an'ny ...
Sales manager ： Wendy Song
ABIKA MICRO MATIC